के तपाईंलाई एन्ड्रोइड फोनका यी गोप्य फिचरहरू थाहा छ? जसले तपाईंलाई सहज बनाउँदछ - Technology Khabar
» के तपाईंलाई एन्ड्रोइड फोनका यी गोप्य फिचरहरू थाहा छ? जसले तपाईंलाई सहज बनाउँदछ
Technology Khabar ६ कार्तिक २०७७, बिहीबार
नयाँ टेक्नोलोजीको साथ फोनमा कम्पनीहरुले एकसेएक राम्रो सुविधा दिईरहेका छन्। विशेष गरी एन्ड्रोइड फोनमा धेरै सुविधाहरू छन्।
तर धेरै पटक हामीसँग हाम्रो फोनका सबै सुविधाहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी हुँदैन वा धेरै उपयोगी सुविधाहरू हुन्छन्। जसले गर्दा हामी ती सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्षम छैनौं। वास्तवमा, स्मार्टफोनसँग त्यस्ता धेरै गोप्य सुविधाहरू हुन्छन् जसको बारेमा हामी सचेत छैनौं।
आज हामी तपाईंलाई एन्ड्रोइड फोनहरूका केहि समान सुविधाहरूको बारेमा बताउँदैछौं। जसले तपाईंको जीवनलाई धेरै सजिलो बनाउँदछ।
१ ब्याट्री बचत
ब्याट्री स्मार्टफोनमा छिटो डिस्चार्ज हुने गर्दछ। वास्तवमा, अधिक एप्स प्रयोग गरेको कारण, फोनको ब्याट्री चाँडै कम हुन सुरु हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ब्याट्री लामो समय चालु गर्न पहिले फोनको ब्राइटनेसलाई कम गर्नुहोस्। यसले ब्याट्री लामो समयसम्म चल्छ। दोस्रो सेटिंग्समा गएर ब्याट्री विकल्पमा जानुहोस् र ब्याट्री सेभर इनेबल गर्नुहोस्।
२ फोटो अटो सेभ
आजकल सबैले फोनबाटै फोटाहरू क्लिक गर्दछ, यस्तो स्थितिमा फोन बिग्रने वा हराउने भएमा त्यहाँ फोनमा सेभ गरिएका तस्बिरहरूको टेन्शन हुन्छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको स्मार्टफोनमा अटो ब्याकअप खोलेर फोटोहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि फोनको सेटिंग्समा सिस्टममा जानुहोस् र ब्याकअप खोल्नुहोस् । त्यसपछि तपाईंको जीमेल आईडी छनौट गर्नुहोस् र ब्याकअप नाउमा क्लिक गर्नुहोस्।
३ फोनमा गोपनीयता
धेरै चोटि हाम्रो साथी वा परिवारको सदस्यले फोन प्रयोग गर्न चाहन्छ र तपाईं कसैलाई च्याट, भिडियो वा अन्य एपहरू हेर्नको लागि चाहनुहुन्न। यस्तो अवस्थामा, गोपनीयता राख्नका लागि एक गेस्ट मोड हुन्छ। यसलाई खोले पछि, नयाँ प्रयोगकर्ताले तपाईंको फोन च्याट, सन्देश वा भिडियो हेर्न सक्नेछैनन्। अन्य गोपनीयता सुविधाहरूको लागि, फोन सेटिङ्गसमा जानुहोस् र सुरक्षा र स्थान(सिक्योरिटी एण्ड लोकेशन) विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। यस पछि, स्क्रिन पिनिङ्ग खोल्नुहोस्। यस पछि तपाइँ कुनै पनि एपलाई पिन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईको फोन अरु कसैलाई दिएमा तपाईले स्क्रीनमा पिन गरेको एप मात्र सो व्यक्तिले देख्न सक्नेछ।
४ नोटिफिकेसनबाट मुक्ति
धेरै पटक तपाईं केहि भिडियोहरूमा क्लिक गर्नुहुन्छ वा नोटिफिकेशन प्राप्त गर्न विकल्पमा क्लिक गर्नुहुन्छ। तर सबै समय, फोनको स्क्रीनमा नोटिफिकेसनहरु आईरहँदा तपाईँलाई पक्कैपनि रिस उठ्नसक्नेछ । नोटिफिकेसनहरूबाट मुक्त हुनका लागि, स्क्रीनमा देखाइएको नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् । यो गरिसकेपछि, त्यहाँ ब्लक र म्यूट विकल्पहरू देखा पर्नेछन्। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सूचनाहरू म्यूट गर्न सक्नुहुनेछ, तिनीहरू तपाईंको फोनमा मौनरुपमा देखिरहनेछन् वा तपाईँले तिनीहरूलाई ब्लक गर्नका लागि विकल्पमा क्लिक गरेमा पुरै रोकिनेछ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७७, बिहीबार
टेलिकमको सेवा अब दोलखाको सबैभन्दा विकट स्थान बेदिङ्गमा
५ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार
नेटफ्लिक्समा नयाँ फिचर थपियो, इन्टरनेट कनेक्सन नभएपनि फिल्म र कार्यक्रमहरू हेर्न सकिने
ओप्पो ‘ईमर्जिङ् ब्राण्ड अवार्ड २०१६’ द्वारा सम्मानित
१५ मंसिर २०७३, बुधबार
भेन्टिलेटरको अभावलाई ध्यानमा राख्दै एमआईटीको टिमले सस्तो भेन्टिलेटर डिभाइस बनाउँदै
ओपोको नयाँ स्मार्टफोन एफ नाइन सार्वजनिक, २५ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा
३१ श्रावण २०७५, बिहीबार
फेसबुकमा भिडियो अटोप्ले कसरी बन्द गर्ने? जान्नुहोस् सजिलो तरिका
ह्वावे र साइरसले संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गरे इलेक्ट्रिक कार, यस्ता छन् फिचरहरु
ग्रामीण भी-स्याटको २२ओटा लाइसेन्स नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग, दुर्गममा बैंकिङ सेवा दिन उपयोगी
रेडमीले यसै महिना आफ्नो गेमिङ्ग सिरिजका फोनहरु सार्वजनिक गर्ने
व्हाट्सएपले आफ्ना आईओएस प्रयोगकर्ताहरूको लागि नयाँ फिचर ल्याउँदै
अमेरिकामा टेस्लाको स्वचालित कार दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु
अमेरिकाको वाशिंगटन राज्यमा २०३० पछि विद्युतीय सवारी साधन मात्र प्रयोग हुने